အများကြီးရှိပါတယ်ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲဤသည်နေ့ရက်ကာလ။ သို့သော်၊ဂိမ်းထုတ်လုပ်သူရှာတွေ့ခဲ့သည်စံပြနှင့်လည်းထူးခြားသောလမ်းမြှင့်တင်မှ၎င်း၏အခမဲ့ဂိမ်းနှင့်၊တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ၊အယူခံကိုအန္တရာယ်များပြန့်ပွား coronavirus ပိုးကူးစက်မှု။ ဗီဒီယိုဂိမ်းထုတ်လုပ်သူ Kagami အလုပ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြန့်ဝေ ၉၀၊၀၀၀ အခမဲ့မိတ္တူများ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲနှင့်အတူအကောင်းဆုံးတယောက်ကိုခေါ်ကြေးမုံမှအတရုတ်၊စောင့်ရှောက်ဖို့လူတွေအတွက်၎င်းတို့၏နေအိမ်သို့လျှော့ချကူးစက်ပြန့်ပွား။ လူအပေါင်းတို့သည်နိုင်ငံသားများရှိလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖို့ဒီကိုေခၚဖုန်းနံပါတ်၊မောင်းထိုးပြအဖြစ်အစိတ်အပိုင်းများ၏မြှင့်တင်ရေး၏ဤကုမ္ပဏီဟုခေါ်"Wuhan၊ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအများမှာ!"။
အဆိုပါဂိမ်းဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ရွေးချယ်ရေး၏မိန်းကလေးများမည်သူစောင့်ရှောက်"ကုမ္ပဏီ"နှင့်အတူကစားသမားပုန်းအောင်းနေစဉ်အတွင်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြစ်ပါတယ်။ မြှင့်တင်ရေးဒီကုမ္ပဏီ၏သက်သေကောင်းတစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့အဖြစ်၊အများအားဖြင့်သက်သေပြသည့်အချက်ကို Kagami ပြီးနောက်၊တစ်ဦးတည်းသာတနေ့၏ဖြန့်ဖြူး၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ၊ခဲ့သည္တစ်ဦးအပိုဆောင်း ၂၀၊၀၀၀ အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်။ အမှန်အလေးပေးဖော်ပြ scantily ခြုံသောမိန်းကလေးများကစားသမားလိုအပ်ချက်များကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်အမျိုးမျိုးသောပဟေဠိဖို့သူတို့ကိုပယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဂိမ်းသည်ဖြန့်ဝေေ၀။,၇၉ ဒေါ်လာ၊ဒါကြောင့် Kagami မဆုံးရှုံးပါဘူး၊အများကြီးပိုက်ဆံပေးခြင်းအားဖြင့်အကွာ၊အခမဲ့လူသိရှင်သည်ပြန်လာဖို့သူတို့ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ။
ပေမယ့်အစ္ကုိမ်ားမူပြီအပေါ်အခန်းကဏ္ဍကို၏ထုတ်ဝေသူ၏မိသားစုဂိမ်း၊အဆိုပါကုမ္ပဏီဖြစ်ဟန်ကွာရွေ့လျားနေကြောင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာနှင့်ပြင်ဆင်နေဖို့သာအနည်းငယ်ပိုရင့်ကျက်။ ကြီးမလိုဟန်ရည်ရွယ်ကနေကွယ်ပျောက်ရွှေ့ဖို့၎င်း၏အစဉ်အလာအခန်းကဏ္ဍကိုအဖြစ်ထုတ်ဝေသူ၏မိသားစု။ အခြားစကားများတွင်၊အညီအတွက်ဆောင်းပါးဖန်တီး၊ဒီဂျပန်ကုမ္ပဏီသတင်းများပေးအယူခဲ့ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက်ပိုပြီးရင့်ကျက်ပရိသတ်မှသူတို့ပြောင်းလဲ။
အပြင်ခွဲခြားသွေးထွက်သံယို၌ပျက်စီးခြင်းနှင့်စစ်တိုက်ခြင်း၌Wolfenstein ၂၊ကျနော်တို့မျှော်လင့်နိုင်အခြားဒါပေမယ့်လည်းအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲတွင်ပထမဦးဆုံးအမျိုးစပ်။ အမည်၊Shinobi Refle:Senran Kagura၊ဂိမ်းအတွက်သင်နှိပ်ၡမ်ားမိန်းကလေးများနှင့်ညဉ့၏ချားလ်စ် ၂:သတို့သမီး၏အလသစ်၊တစ်ဦးအရေးယူတူ scantily ခြုံထားတဲ့အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်၊အလာအကူးအပြောင်းမှ။, ကြောင်း၏ထိပ်တွင်၊ယခင်က၊သူကအတည်ပြုမယ်လို့ရိုက်ကူးကြောမိန်းကလေးများအတွက် Gal သေနတ် ၂ တူတဲ့ pheromone အပေါ်အပြောင်းအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ၊အရာအံ့သြအဆိုပါဂိမ်းအုပ္ဆုိင္ကိုယ်ကိုသူတို့မမျှော်လင့်ထိုကဲ့သို့သောခေါင်းစဉ်အစဉ်အလာဘဝမှအပေါ်လေ့လာရေးရဲ့။
ညီအစ္ကုိမ်ားကတိုက်တွန်းအချို့အကြမ်းမဖက်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းထုတ်ဝေသူများကိုအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများအတွက်မိမိတို့ပြောင်းခလုတ်အ tarnish မိသားစု-သာကိရိယာထုတ်လုပ်သူပုံ။ အချို့အုပ္ဆုိင္တောင်းဆိုသောနှာရှိ"ခဲ့ပြီးဆိုရှယ်မီဒီတော့ဝေး"မှကြွလာသောအခါအကြမ်းဖက်များနှင့်အန္တရာယ်များခေါင်းစဉ်။ သို့သော်၊ထိုအတူမပြောသည်၎င်းတို့၏လက်ရှိရပ်တည်ချက်။ သို့သော်ငြားလည်း၊မလိုကြောင်းဖော်ပြထားသည်"အဖြစ်စာအုပ်များ၊ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်များ;ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများအတွက်ရည်ရွယ်ကွဲပြားခြားနားသောပရိသတ်တွေ"။, ဒါကြောင့်ရန်မချဲ့ကားပြောကြောင်းများ၏နယ်မြေချဲ့ထွင်၏အစုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအပေါ်အပြောင်းအလဲအလှည်နည်းအစ္ကုိမ်ားအတိုက်ပြိုင်ပွဲအားဖြင့်ကိုယ်စားပြုထူးချွန်၏အစတေရှင် ၄ အတႏွင့္။
အရယ္ကေဗားရှင်း၏အဆင့်သို့ေရကျိုးနပ်မဖြစ်သည်စောင့်ဆိုင်းနေ ၁၀ နှစ်အဘို့
မကြာမီပြီးနောက်အဆင့်သို့ေ၊အရာကျမတို့ရှိခဲ့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြဆယ်နှစ်၊တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးညစ်ညမ်းပြက်ထွက်လာခဲ့သောအလျင်နှင့်မနီးပါးကောင်း၊အများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တောင်မှအနည်းငယ်စိတ်ပျက်။ နောက်ဆုံးစိတ်ကူးယဉ်သို့ေခဲ့ခဲ့ကွောငျးဂိမ်းတစ်ခုအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ဆယ်နှစ်၊နှင့်သှားသောအရာအားလုံးကတဆင့်နောက်ဆုံးတွင်မှစီမံခန့်ခွဲမွေ့လျော်၎င်း၏သစ္စာ။ -အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုဘူတာရုံသည်ညမ်း၏ရုပ်ပြောင်ဟာသအ Brazzers ကုမၸဏီ၊uncharacteristically လျင်နှင့်လုံးဝပျက်ကွက်ကြိုးပမ်းမှုတို့တွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ။, သင်ပြောပြလိမ့်မယ်အဆိုပါမရှိခြင်း၏လင့်များနှင့်ဗီဒီယိုများအတွက်ဒီသတင်းအသိသာအကြောင်းရင်းများကြောင့်၊ဒါပေမယ့်ယုံကြည်မှုကမဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့သည်ထွက်ပျောက်ဆုံးနေဆဲနေတာပါ။
တောင်မှခေါင်းစဉ်ကိုယ်တိုင်ကပင်နီးကပ်မဟုတ်မူရင်းမှ၊ငါတို့သည်ဝန်ခံမည်အကြောင်းသူတို့၏လိုဂိုအတော်လေးကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပြီးနောက်အမှတ်တံဆိပ်၊အရာမှားသွားတယ်။ အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါသည်ပြောင်မှန်မဲ့ပေမဲ့၊နောက်ဆုံးစိတ်ကူးယဉ်သို့ေမရှိပြောင်လုံး၊အဓိကအအမျိုးသမီးအခန်းကဏ္ဍအ Nikki ဝင္လာတဲ့သူ၊အထင်ကိုကိုယ္စားျစင်။ သေး၊စင်ရှိပါတယ်၊တိုတောင်းသောဆံပင်ရွှေရောင်ဆံပင်၊နှင့် Nikki ရှည်လျားအညိုရောင်နှင့်သိသာကိုမျှစိတ်ကူးရှိပါတယ်ကြောင်း။
အဆိုပါရုပ်ရှင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အနည်းငယ်ရယ်စရာ၊ဒါပေမယ့်ပြတ်စေဖို့လုံလောက်ပြီးတွန့်ဆုတ်ကကိုးကား၊အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပီးေကာင္းမထိ။ ကျွန်တော်ထပ်အကြံသော်လည်း၊ရုပ်ရှင်ရဲ့အကြောင်းရင်း Nikki ပြင်ဆင်တ္ႏသားကားတော၌ရှိကြ၏သောအခါအနည္းဆံုးသိက Nikki သေသောနောက်၊သူတွေ့ရှိဒါဟာအသာနဂါးသူ၏သွားနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်။ ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းင်လျက်ရှိသည်သင်သည်အဘယ်သို့ insinuated။ အဖြစ်ပရိသတ်တစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ၊သကဲ့သို့သင်တို့ကိုစိတ်ပျက်သွားအဖြစ်နေကြတယ်?
Haydee တစ်ဦးအဖြစ်ရော့ခ်ခေါင်းစဉ်အနည်းငယ်နှင့်အတူအဟောင်းတွေဂိမ်းစက်အတော်လေးအံ့သြနေတယ်တို့တွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ၊ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကြောင့်ဇာတ်ကောင်ရဲ့တန်ကြီးမားတဲ့ရင်သား။ အားလုံးပြီးနောက်၊ဂိမ်းအမှန်တကယ်အများကြီးရှိပါတယ်။ တူများစွာသောအခြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ၊ထိုသို့ဖြစ်နိုင်ရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်အချို့အနည်းငယ်အသက်ဂိမ်းကစားအကြားရှိသည်သောသင်သည်းခံများအတွက်ပိုမိုခက်ခဲရှုပ်ထွေးပဟေဠိနှင့်အရေးယူအချိန်လေးအကြောင်းမှာနောက်ပိုင်းတွင်"အခန္း"။ လမ်းဖြင့်၊ဂိမ်းရှိကွောငျး ၁၆၀"အခန္း"ဟုေျပာဆို၏။